धेरैले भोगिरहेको समस्या हो, कब्जियत । कतिपय अवस्थामा यो क्षणिक पनि हुनसक्छ । तर, खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिएन भने कब्जियतले गंभिर समस्या निम्त्याउन सक्छ । कब्जियत के हो ? कब्जियत एक यस्तो स्थिती हो, जो पेट ठीक ढंगले सफा हुन पाउँदैन । साथै मल त्याग गरेको समयमा कष्ट हुन्छ । कब्जियत पीडित आम व्यक्तिको.....
के तपाई पायल्सको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ । यो, निकै कष्टकर समस्या हो । गलत खानपान र जीवनशैलीले निम्त्याउने यो समस्याबाट धेरैजना ग्रसित हुन्छन् । तर, लाजको कारण रोग लुकाउँछन् । जबसम्म समस्याले जटिल रुप लिदैन, तबसम्म उपचार खोजिदैन । मलद्वार र मलाशयका भित्ताहरुमा रहेको रक्तनली सुन्निने र त्यसबाट उत्पन्न.....
घरमा एउटा तेजपत्ता जलाउनुहोस्, हुनेछ यस्तो चमत्कार !
विशेष गरेर तरकारी र चियालाई स्वादिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गरिने तेजपत्ताले खानेकुराको स्वाद नै परिवर्तन गरिदिन्छ । तेजपत्तालाई खानेकुरामा मात्र नभएर अन्य तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तेजपत्तालाई पानीमा उमालेर पिउनाले विभिन्न रोगहरु निको हुन्छ । तेपत्तालाई खाने मात्र नभए उज्यालो दिने र घरमा मिठो.....
मानव जीवनमा स्मरणशक्तिको ठूलो महत्व छ । स्मरणशक्ति तेज भएका मानिसहरुले हरेक क्षेत्रमा चाँडो प्रगति गर्न सक्छन् । कमजोर हुनेहरु पछि पर्छन् । त्यसो त मानिसहरुको जन्मजात स्मरण क्षमतामा खासै अन्तराल हुँदैन । करिव-करिव उस्तै हुने हो । तर, बाँच्ने क्रममा कसैले त्यसलाई तिखारेर तेज बनाउँछन् भने कसैले भुत्ते.....
काठमाडौं । अनारलाई सबभन्दा स्वास्थ्यवर्द्धक र पोषक तत्त्वले भरपूर फल मानिन्छ । स्वाद पनि यसको गजबको हुन्छ ।टन्नै फाइबर, भिटामिन सी लगायतका तत्त्व हुनाले अनार दिनदिनै खानु राम्रो हुन्छ । यसले भुँडी लाग्न दिँदैन ।अनारको जुस पिउनु अत्यन्त लाभदायक हुन्छ ।आजकल दिनदिनै स्तर क्यान्सरका घटनाहरू सुनिन्छन् ।.....
ब्रेकअपलाई लिएर एक शोधकर्ताले निश्कर्ष निकालेका छन् । जसबाट ब्रेकअपको पि’डा सजिलै छुटकारा पाउन सकिन्छ । र डिप्रेसनमा जानबाट आफुलाई जोगाईन्छ । शोधकर्ताले गरेको सहभागीबीच प्रश्न उत्तरमा राम्रा तथा प्रधावकारी उपायहरु निस्किएका थिए । निस्किएका उपाय मध्ये आफ्नो प्रेमीको बारेमा जति सक्दो नराम्रो सोंच्नुपर्छ.....
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले दैनिक एक कप ब्ल्याक कफी पिउँदा मुटु रोगको समस्या १२ प्रतिशतसम्म कम हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । २१ हजार जनामा गरिएको एक शोधपछि वैज्ञानिकहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् । रिसर्चका अनुसार कफीमा पाइने एन्टीअक्सीडेन्टसले शरीरमा हुने स्वेलिङ (सूजन) को मात्रा कम गर्छ र भविष्यमा.....
कपाल झर्ने समस्याबाट धेरै मानिस चिन्तित हुने गरेका छन् । व्यक्तिको वास्तविक ‘लुक’ देखाउन कपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हेयर स्टाइल मात्र बदलियो भने पनि व्यक्तिको सुन्दरतामा निकै अन्तर आउँछ । कपालले अनुहारको वास्तविक ‘सेप’ र सुन्दरता देखाउन मद्दत गर्छ । कपाल झरेर तालु खुइलिनु कुनै ज’टिल रोग होइन.....
पुरुष र महिला भिन्न भएर पनि एकअर्काका परिपूरक हुन् । एकको अस्तित्वबिना अर्को सम्भव छँदै छैन । त्यसकारण महिलालाई पुरुष एवं पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्छ । अधिकाँश पुरुषलाई महिलाको बारेमा त्यति नै थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देख्छन् र सुन्छन् । खासमा धेरै पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले.....